वामदेव ठान्छन् सांसद पद पेन्सनपट्टाको नामसारी - Sadrishya
वामदेव ठान्छन् सांसद पद पेन्सनपट्टाको नामसारी
: 1,235 views
-सञ्जिव कार्की Oct 11, 2018
लोग्ने मरेपछि स्वास्नीको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने पेन्सनपट्टा जस्तै हो र संसदको लोगो ? अथवा जग्गाको लालपुर्जामा जग्गाधनी फेरे झैँ फेर्न मिल्छ संसद्को लोगो ?
नेपाली राजनीतिक रंगमंचका एक चर्चित र बिबादास्पद पात्र हुन, वामदेव वामदेव गौतम । सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिलाई गुमनाम बस्न मन्जुर हुन्छ, गुमनाम रहन्छ पनि तर बदनाम हुन चाँहदैन । तर, अहिले राजनीतिको तलाउमा एउटा यस्तो तरंग पैदा गर्दैछन वामदेव, जसले एक राजनीतिकर्मी गुमनाम हुनुभन्दा बदनाम नै किन नहोस चर्चा र बिबादको मध्यभागमा रहन चाहन्छ भन्ने पुष्टि गदैछ ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि जनतामा राजनीतिप्रति पैदा भएको उदाशिनता र घृणाभाव अरु प्रवल र मजवुत बन्दैछ । केहि मान्छेले भने झैँ फोहोरी खेल बन्दैछ, राजनीति । राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउँदैछन् राजनीतिकर्मी आफैले ।
राजनीतिकर्मीलाई केवल चर्चा भए पुग्यो चर्चा नाम र सुकृतिको त जो कोही भोको हुन्छन, नाम चाहन्छन, तर दुर्नाम र बदनामको भोक चै राजनीतिकर्मीलाई मात्र लागिरहन्छ जस्तो अहिले वामदेव गौतमलाई लागेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा वामदेव त्यस्ता पात्र र प्रवृति हुन जसको योग्यता र क्षमताबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । जनताबाट पटकपटक अस्वीकृत पात्र किन फेरि कुवेलामा मन्दिरको घन्टी बजाउने बतास बन्न रुची राख्दैछन ? पूजाको साइतमा बजेको शंख शुभ मानिन्छ, तर कुवेलामा बजेको शंख वियोगान्त घटना र अवस्थाको संकेत हो, वामदेव कुबेलामा एकोहोरो शंख फुकेर आफ्नो राजनीतिको मलामी बन्न तम्सिएका छन्, हौसिएका छन् ।
तीनतीन पटक देशको उपप्रधानमन्त्री र तत्कालिन माले पार्टीको महासचिव भै सकेका वामदेवको क्षमता देखाउँने बाँकी ठाउँ र स्थान भनेकै प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्ने लालसा नै वामदेवको झ्यालबाट सदन छिर्ने दाउँ हो कि ? संसद हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्ने ढोकासम्म पुग्नु हो । तर, सबै उमेदवार प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य हँुदैनन ।
वामदेवले संसद्को लोगो लगाउँन देखाएको उत्कट अभिलाषालाई तार्किक र विश्वसनीय आधार र कारण देखाउँन वामदेवसँग ल्याकत पनि छैन तागत पनि छैन ।
नेकपाले वामदेवको संसदमा आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्न र कसरी भोट माग्छ ? के राजनीतिक नैतिकताले वामदेवको लागि भोट माग्छ नेकपाले ? के चमत्कार र विलक्षण सम्भावना छ वामदेवमा र उनको संसदमा उपस्थिति हाजिरी ? उनमा के उल्कापात गर्ने क्षमता छ र जादुको छडी छ वामदेवसँग र उनले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र विकास निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् त्यो जनतामा छिपेको छैन ।
वामदेवले देशको लागि लगाएको कुन गुण वा ऋण तिर्न काठमाडौंवासीका जनताले वामदेवको पक्षमा मतदान गर्ने ? पुरै देश वाममय भएको समयमा तत्कालिन एमाले र माओवादीको नाममा चरो, मुसो, बिरालो स्याल र छेपारो जोसुकै उमेदवार बनेर निर्वाचन जित्ने माहोल बनेको समयमा पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने वामदेवले सो चुनाव हार्नुको कारण र तथ्य खोज्नु पर्दैन र ?
जनमत वामदेवको विपक्षमा किन गयो ? त्यसको कदर गर्न पनि वामदेवको महत्वाकांक्षालाई पाँच वर्षसम्म लगाम लगाएर जनताको वीचमा काम गरेर बस भन्न नेकपालाई केले रोेकेको छेकेको छ ? के सांसद पद जग्गा नामसारी गरे झैँ सार्ने, रजिस्ट्रेसन पास हुने बन्धकी चलाउँन पाइने घर जग्गाको कारोबार हो ? लालपुर्जा हो संसद्को लोगो जसले बढी पैसा दिन्छ उसैको हुने ?
देशको कुन गति र लयमा ब्रेक लाग्यो वामदेवको अभावले संसदमा ? अहिले भैरहेको ढिलासुस्ती, मनपरी, छाडातन्त्र, लापरवाही गतिहिनता, दिशाहिनता र अकर्मण्यताको प्रमुख कारण र असर भनेकै वामदेवको संसदमा रिक्तता हो ?
यदि केपी ओलीका सबै बतासे सपना सिद्द गर्ने अचुक र अच्युत अश्त्र वामदेव गौतम हुन भने नेकपाले सिधै प्रधानमन्त्रीका लागि वामदेव संसदमा लादैछौ , हामीले सकेनौ हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु क्रमश सर्वश्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पूनः यो संसद रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने छैनौ वामदेव एकमात्र निर्विकल्प हुन भनेर घोषणा गरे भैहाल्छ । अरु पछिल्लो पुस्ता र दर्जाका नेताले पनि कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने छैनन भनी प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने हो कि ?
कुन आवश्यकता, औचित्यता र प्रसंगले वामदेवको भूमिका अपरिहार्य बन्दैछ संसदमा यसको विपक्षी मत पनि शायद नेकपा भित्र छ हुनुपर्छ, विवेकी नेता र कार्यकर्ता पक्कै पनि थुप्रैछन् नेकपा भित्र तिनले शायद खोज्लान वामदेवको रोल मोडेल किन देशले अपेक्षा गर्छ या गर्दैन ?
एउटा कुरा र तथ्यसँग भने नेकपा भित्र पक्कै पनि मतैक्य छ, पार्टी भित्र । वामदेव देश र संसद्को अनि सिंगो पार्टीको आवश्यकताभन्दा पनि केहि नेताको शक्ति सन्तुलन र पवार एक्सरसाइजको उपयुक्त गोटी चै हुन, उनलाई र उनको महत्वाकांक्षालाई जगाउँने मलजल गर्ने र आजको यो स्थितिसम्म ल्याइपुर्याउँन भने पार्टीका सुप्रिमोहरुको आ–आफ्नो स्वार्थको खेल हो । नतिजा आफ्नो पोल्टामा पर्ने कुत्सित छल र चाल हो । राजनीतिमा जीतहार, जय पराजयभन्दा पनि ठुलो शक्ति नैतिकतासँग हुन्छ, पद, शक्ति र हुलभन्दामाथि सधै नैतिकता हुन्छ । नैतिकताभन्दामाथि केहि हुन्न ।
हारजीत जे भए पनि नैतिकता सकियो, भुलियो र छोडियो भने सबैभन्दा ठुलो क्षय र पराजय हो । नैतिक अस्त्र नभएको राजनीतिको हतियार कुनैपनि युद्दको लागि कामयावी हुन सक्तैन । यस्तै भुत्ते र खिया परेको अनैतिक अनुहार लिएर वामदेव काठमाडौंमा मत रुपी भिक्षापात्र बोकेर आउँदैछन ।
काठमाडौंका जनताले बिद्यासुन्दरको नाम हेरेर भोट दिने कि ? काठमाडौँ सहरको विरूप चेहेरा देखेर ? सडकको स्तर उन्नति देखेर भोट गर्ने कि ? कुनै व्यक्तिको लागि प्रणाली कब्जा गरेको सम्झेर ? केपी ओलीको रेल र पानीजहाजको आश्वासन सुनेर भोट दिने कि सरकारले तोकेको, तर ब्यापारीले राखेको खरिद बस्तुको मुल्य सुनेर ?
जनता वामदेवलाई भोट हाल्न किन राजीखुशी बन्लान ? रैती हुन आजका नेपाली जनता जसको जस्तो उर्दी पनि शिरोपर गर्ने ? जनतामा विवेक छैनर ? नेताको बुद्दिको भाडोमा बिर्को लाग्यो भन्दैमा जनताको विवेक मर्छ र ? न्याय अन्याय, ठिक बेठिक छुट्याउने शक्ति र सामर्थ्य जनतामा भएर नै वामदेवले पटकपटक चुनाव हारेका हुन । देशभर वाममय चुनावी लहर हुदा बर्दियामा वामदेवको क्षेत्रमा चुनावी लहर नपुगेको निश्चय नै होइन होला ?
चुनाब हारी रहने वामदेव चै संसदमा न भै नहुने पटकपटक चुनाव जित्ने रामवीर मानन्धर चै नभए पनि हुने कस्तो संसदीय अभ्यास गर्दैछ नेकपा ? एकजना हारेको नेताको इच्छा रहर र मरिहत्तेको लागि पुरै देश, निर्वाचन प्रणाली, जनतामा निर्वाचनको कारण पर्ने आर्थिक बोझ अनि झमेला किन थपिदैछ ? उपनिर्वाचनको विशेष परिस्थिति र उपादेयतामाथि किन खिल्ली उडाईदैछ ।
अर्काले खनेको खाल्डोमा पर्नबाट जोगिनु पर्नेमा किन आफै आफ्नो पतनको खाल्डो खन्न कन्दनी कसेर लागेका छन नेकपाका नेताहरु ? कमरेड वामदेव गौतमविना संसद अपुरो र अधुरो भएर नै यस्तो ओरालो यात्राको यात्री बन्न मन लागेको हो ? के सरकारी पदविना वामदेव पार्टीको नेता भएर पार्टीको काम गरेर बस्न सक्तैनन् । सत्ता बाहिर बस्न नै नहुने, राख्न नै नहुने कुन त्यस्तो धातुबाट बनेका मान्छे हुन वामदेव ? उनका लागि किन नैतिकता तिलान्जली गर्नु आवश्यक भयो नेकपाको लागि ?
सत्य आत्मसाथ गर्ने मन मुटु र मस्तिष्क नेकपाका नेतामा नभएकै हो त ? जनता कसैका बधुवा हुन उर्दी आउने बित्तिकै विवेक गुमाएर आत्मघाति फैसलामा ल्याप्चे लगाउँने ? राजनैतिक नेतृत्व कुनै जमिनदारी हो चाहेको बेला सजिलै किनबेच गर्न मिल्ने, नामसारी गर्न मिल्ने ? पेन्सनपट्टा हो संसद पद नामसारीको हकदावी हाल्ने ?
प्रशंसा सुन्नु र सत्य कुरा सुन्नु फरक कुरा हो । प्रशंसा सुन्ने बानी परेकाहरु फरक सत्य सुन्न रुचाउँदैन, सत्य पचाउँन सक्तैनन । सत्यसँगको नजदिकी उसलाई मन पर्दैन सत्यसँगको साक्षात्कार उसलाई भारी हुन्छ । उसको चाह र स्वार्थको रुकावट ठान्छ, सत्य वचन र आग्रहलाई ।
नेकपाका केहि विवेकशिल नेता र कार्यकर्ता वामदेवलाई काठमान्डौंमा चुनाव लडाउँने निर्णयले भयभीत भएका छन्, पार्टीले गर्न लागेको आत्मघाती कदमले मर्माहन्त छन् । पार्टीलाई गम्भिर भएर सोच्न आग्रह गर्दैछन, तर प्रशंसा मात्र सुन्न चाहने ओली नेतृत्व पार्टी पंक्तिको त्यो सच्चाई सुन्न मन पराउँदैन किनकी सत्ता अन्धो छ, बैरो छ, र सवालंङ्ग छैन ।
सत्ताको आखामा अहंकारको मोतिबिन्दु भएको छ कानमा प्रशंसाको ऐँजेरु पलाएको छ । जनता र कार्यकर्ता भन्न थाले वामदेव नै चाहिने यथेष्ट र कारण र अरु सकारात्मक परिणामको आंकलन के हो ? राज्यकोषको बाइहात दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रको बलि चढाउँन किन तयार हुदैछ नेकपा ? डोल्पा, बाँके, रुकुम, इलाम बैतडी, नवलपरासीलगायत सारा ठाउँ चाहरेर किन र कसरी रामवीर मानन्धरलाई विशेष आश्वासन दिएर काठमान्डौंमा आइपुगे वामदेव ?
वामदेवलाई सदन लैजान प्रचण्डले देखाएको सक्रियता र अग्रसरताको अर्थ पूर्व एमालेजनले कति बुझे कति सम्झे ? शक्ति संघर्ष र सत्ता संघर्षमा सधै खेल्ने जहिल्यै रुची राख्ने प्रचण्डले कुन अभिष्ट र उदेश्य बोकेर वामदेवलाई काँध गल्ने गरी बोकी रहेका छन् । बिगतदेखि वर्तमानसम्म र हाल एकिकृत रहदासम्म अब हुने आन्तरिक सत्ता संघर्ष र चलखेलको लागि उपयुक्त पात्र र प्रवृति वामदेवमा प्रचुर देखेर नै प्रचण्ड वामदेवको सामिप्यताको अर्थ खोज्न मथिंगल दुखाउँनु पर्दैन ।
पहिलो कुरो त आफ्नो इमान स्वाभिमान बिर्सेर नालायक पात्रलाई काठमान्डौंले भोट गर्दैन कथंकदाचित वामदेवले जिते भने नेपाली राजनीतिमा प्रर्दुषित एउटा नराम्रो कुसंस्कारको पुनरागमन हुनेछ, दुई तिहाई सरकारमा अस्थिरताले जरो हाल्ने छ एउटा नेताको अभिस्ट र सनक पुरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक मुल्यको खिल्ली उड्ने छ, निर्वाचन माध्यमको दोहोलो काढिने छ । अकस्मात विशेष परिस्थिति अप्रिय घटना र अवस्था उत्पन्न भएर हुने उपनिर्वाचनको औचित्य समाप्त भएर बेला न कुबेला पद रिक्त पार्ने योजना बनाई निर्वाचन गराउँदा फजुल खर्च र अनावश्यक आर्थिक व्ययभार र बोझ थप्नु जनाताप्रतिको अपमान हो । अनैतिक दुस्हास हो ।
वामदेव जित्ने अभिलाषाले काठमाडौँ आएका हुन, तर उनले जित्ने आधार र सम्भावना र अर्थको खोजी यहाँ गरिन्छ ।
वामदेव संसद भित्र छिर्ने कुनै पनि राजनैतिक, नैतिक र सामाजिक अनि ब्यबहारिक आधार र कारण छैन । उसो त यतिबेला सत्ता पक्षको लोकप्रियताको ग्राफ तल झन् तल खस्केको स्थिति छ । जनमत ओलीको बोलीलाई पत्याउँने र विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन । जताततै भताभुंग र भद्रगोल छ । पार्टीका जिल्ला र प्रदेश कमिटि पनि छैनन् । भएका पनि पूर्ण र व्यवस्थित बनेका छैनन् ।
नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको स्थानमा स्थानीयलाई राजीनामा गराएर गैरस्थानीयलाई ल्याएर थोर्पन खोज्नु त्यति सहज छैन । नेकपाको सैद्दान्तिक भोट नै छिरलिएको बेला सर्वसाधरणले नेकपा र वामदेवलाई भोट गर्छन भन्ने के ग्यारेन्टी ?
आफैमा अलोकप्रिय वामदेव उनको कुन विशेष क्षमता र योगदानको लागि काठमाडौँवासीले भोट गर्ने ? रामवीर मानन्धर हटेर वामदेव आउनुको राजनीतिक मुल्य के हुन्छ, स्थानीयवासीका लागि ?
कुन क्षेत्र र शक्ति वामदेवको पक्षमा छ ? सामाजिक सञ्जाल आज किन वामदेवको उमेदवारी विरुद्द बहस पैरवी गर्दैछ । वामदेवले जित्दा लोकतन्त्रको कुन चै मुल्य र मान्यताको संस्थागत विकास हुन्छ र ?
वामदेवको अब कुन चै योगदान र कर्मले देशले सकारात्मक पाटो भेट्टाउँछ ? वामदेव जितेर देशको कुन पद्दति बलियो हुन्छ मजबूत देखिन्छ ? पार्टीको लागि वामदेवको सदनमा अपरिहार्यता किन भयो ? पटकपटक परिक्षित र अस्वीकृत नेता कुन औचित्य सावित गर्न जित्न चाहन्छन ? वामदेवको योगदान र मुल्यांकन पहिल्यै भैसकेको छ थुप्रै अवसरबाट लाभ हासिल गरिसकेका छन् ।
खुल्लामञ्चमा हजारौं मान्छेको अघि देशको एक नम्बर भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको तत्कालिन एमालेले अब वामदेवलाई आफैले सुनपानी छर्केर चोखिएको फैसला गरेर भोट माग्छ कि अरु नै कसैले भोट मागि दिएर, अदृष्य शक्तिको आशिर्वादले चुनाव जित्छन, त्यो हेर्न उत्साहित छन् नेपाली जनता ।
राजनीतिकर्मीलाई सवक सिकाउँन र नैतिकताको ख्याल गराउँन पनि काठमान्डौंका जनताले वामदेवको तन्द्रा टुटाई दिने छन, भ्रम हटाउँन योगदान गर्नेछन ।